Maazị Snail - Ụmụ nwoke hụrụ n'anya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Maazi Snail nkezi 3.4 / 5 si 9
NA / A, o nwere ihe nlere 25.3K
Lovemụ nwoke Lovehụnanya, mma, romance, Ndụ akwụkwọ, Weebụ, Akwụkwọ ntanetị, Yaoi
Ka Septemba na-abịa, semester ọhụrụ amalitela na Shang Ming Highschool. Dọkịta ụlọ akwụkwọ ahụ, Song Yue, anabatakwala onye ya na ya bi - onye isi ụlọ nri, Xu Xiaodao. Maazị Song chere na Xu dị ka "Nwa nwanyị Snail". Kemgbe ọ malitere ibi ebe a, ụlọ ahụ adịla ọcha nke ukwuu. Ọ bụghị naanị na ọ na-asachapụ, ọ na-esikwa nri niile ma na-asa ákwà! Nke a na-enyo enyo n'ezie! Ihe na-akawanye njọ mgbe Mr Song chọpụtara na Xu Xiaodao maara ntakịrị ihe banyere ya na ọ na-ejidekwa onwe ya ntakịrị. Ọzọkwa, Xu Xiaodao na-elekọta ya nke ukwuu?? Ihe adịghị mfe ka ọ dị…
Chapter 49 February 10, 2022
Chapter 44 February 10, 2022
Chapter 43 February 10, 2022
Chapter 37.1 January 20, 2022
Anyị enweghị ike ịlaghachi naanị ịbụ ndị enyi
Gwọ Ọrụ Na-abịa Mgbe Ntụziaka ahụ gasịrị